UNGAZINYANZELA NJANI UKUBA ZIQOBE IINKQUBO ZEMAC NGENDLELA EMFUTSHANE YEBHODI YEZITSHIXO - ITHAMBILE
Kukho amaxesha apho usetyenziso kwi-Mac yakho lungaphenduliyo kwimiyalelo yakho kwaye awukwazi ukurhoxisa ezo zicelo. Ngoku, awudingi kuphakuzela, ukuba uhlangabezana nemeko enjalo, nazi iindlela ezintandathu onokuthi uyeke ngazo umsebenzi okanye indawo okanye inkqubo enendlela emfutshane yebhodi yezitshixo. Kuya kufuneka ube unamathandabuzo malunga nokuba kukhuselekile na ukuyeka izicelo ngenkani okanye hayi? Ke kukho inkcazo yamathandabuzo akho ngolu hlobo lulandelayo:
I-hdmi ayisebenzi windows 10
Ukunyanzela ukuyeka isicelo esingaphenduliyo kuyafana nokubulala intsholongwane xa sigula. Kuya kufuneka ubone umbono obanzi woku kwaye uqonde ukuba yeyiphi eyona ngxaki kwaye ungayinyamekela njani ukuze ingaphinde yenzeke.
Ke, isizathu kukuba wena awunayo imemori eyaneleyo kwi-mac yakho (i-RAM ayonelanga) . Oku kuyenzeka xa imac yakho iswele imemori eyaneleyo yokusebenza nezicelo ezitsha. Nanini na xa uqhuba umsebenzi kwi-mac yakho, inkqubo ayiphenduli kwaye iyabanda. Khawufan 'ucinge i-RAM Njengento ebonakalayo enendawo encinci yokuhlala okanye yokugcina into emva koko, awunakunyanzela into ukuba ilungelelanise ezinye izinto ngaphezulu kwayo. Njengale RAM ye-mac yakho ayinakho ukusebenzisa usetyenziso ngaphezulu komthamo wayo.
Indlela yoku-1: Unganyanzela ukuShiya iApp kwiMenyu yeApple
Indlela yesi-2: Lawula + uKhetho + Ubaleke
Indlela yesi-3: Ungayivala iApple esebenzayo yeMac ngoncedo lweKhibhodi yakho
Indlela yesi-4: Unganyanzela ukuShiya iZicelo kwi-Dock
Indlela yesi-5: Ungasebenzisa uMsebenzi woLiso ukunyanzela iiNkqubo zoSetyenziso
Indlela yesi-6: Ungasebenzisa iTheminali kunye nokubulala uMyalelo
Ukuthintela ukungaphenduli kwezicelo, kuya kufuneka uqhubeke nokucima izinto ongazifuniyo kwi-mac yakho okanye ungagcina iifayile kwi-pen drive yakho ukuze ube nendawo eyaneleyo yokusebenzisa usetyenziso oluninzi. Ngokwenza njalo, ngamanye amaxesha kunokubangela ukulahleka kwedatha egciniweyo. Ke, zilandelayo zezi ndlela zintandathu onokuthi unyanzele ngazo ukuyeka usetyenziso kwi-Mac yakho xa zingaphenduli:
Oku kulandelayo ngamanyathelo okusebenzisa le ndlela:
Le yenye yeendlela ezilula ukukhumbula kodwa ayisiyiyo eyona ndlela inamandla kuba kunokwenzeka ukuba isicelo asiphenduli kwaye imenyu ayinakho ukufikelela.
Le ndlela ilula kakhulu kunokusebenzisa uMsebenzi wokuHlolwa. Kwakhona, oku kulula kakhulu ukukhumbula ukucofa. Ukucofa iqhosha kukuvumela ukuba urhoxise izicelo ezininzi ngexesha elinye.
windows 10 1803 isilele ukufaka
Le keypress yeyona ndlela imfutshane yokuyeka umsebenzi okanye inkqubo okanye indawo okanye idemon ngokunyanzelwa.
Le yenye yeendlela ezilula zokucima usetyenziso. Oku kulandelayo ngamanyathelo okusebenzisa le ndlela:
Ngokuqinisekileyo oku kuya kunceda ekupheliseni isicelo kwangoko.
Gcina ukhumbula ukuba kuya kufuneka ucofe eliqhosha xa isicelo ofuna ukusivala kuphela kwesicelo kwi-Mac yakho ngelo xesha, njengoko esi sitshixo sokunyanzela siyakunyanzela ukuyeka zonke iinkqubo ezisebenzayo ngelo xesha.
Isitshixo: Lawula + uKhetho + Shift + Escape ide insiza inyanzeliswe.
Le yenye yeendlela ezikhawulezayo kodwa ezilula zokuvala usetyenziso kwiMac yakho. Kwakhona, kulula ukucofa nje ukucofa.
Landela la manyathelo alandelayo ukusebenzisa le ndlela:
isikrini esimnyama xa udlala imidlalo
Ngokusebenzisa le ndlela, isicelo siza kuyekwa ngenkani ngaphandle kwesiqinisekiso, kuya kufuneka uqiniseke ngaphambi kokufaka le ndlela.
Umsebenzi wokubeka esweni yenye yeendlela ezinamandla zokuyeka nayiphi na iapp, umsebenzi, okanye inkqubo yokunyanzelwa eqhubayo kwi-Mac yakho. Ungayifumana kwaye ucofe kuyo iiVenkile okanye iiVenkile OKANYE unokuyivula ngokucinezela i-Command + Space kwaye emva koko uchwetheze 'Umsebenzi Monitor' kwaye ucofe iqhosha lokubuya. Le ndlela isebenza kakhulu. Ukuba ezi ndlela zilapha ngasentla ziyasilela ukunyanzela isicelo emva koko, le ndlela iya kusebenza ngokuqinisekileyo. Kwakhona, kulula kakhulu ukusebenzisa uMsebenzi wokuHlolwa. Oku kulandelayo ngamanyathelo okusebenzisa le ndlela:
Kulo myalelo we-killall, ukhetho lokugcina ngokuzenzekelayo alusebenzi, kuya kufuneka ulumke kakhulu ukuba ungalahli idatha yakho engagcinwanga. Ihlala isebenza kwinqanaba lenkqubo. Oku kulandelayo ngamanyathelo okusebenzisa le ndlela:
Ke ezi ziindlela ezintandathu onokuthi unyanzele ukuba ziyeke usetyenziso kwi-mac yakho xa zingaphenduli. Ngokukodwa, izicelo zakho ezinqabileyo zinokuyekiswa ngenkani ngoncedo lwendlela engentla kodwa ukuba awukakwazi ukunyanzela ukuyeka isicelo emva koko, kuya kufuneka undwendwele Inkxaso yeApple .
misa ikhowudi irql hayi ngaphantsi okanye ngokulinganayo windows 10
Ngoku, ukuba i-mac yakho ayisakwazi ukunyanzela ukuyeka isicelo nasemva kokusebenzisa zonke ezi ndlela, kuya kufuneka unxibelelane nomqhubi wakho we-mac. Kuya kufuneka uzame ukubiza umgca wabo wenkonzo yabathengi kwaye ukuba abanakukunceda, kuya kufuneka unxibelelane neNkxaso yeApple. Umntu unokugqiba ukuba kukho umba othile onxulumene nezixhobo zekhompyutha kunye neMac yakho ukuba zonke iindlela ezichazwe apha ngasentla azisebenzi.
Okucetyiswayo: Lungisa iPhone Ayikwazi Thumela imiyalezo SMS
Kungcono uzame indlela nganye ngaphambi kokuya kwivenkile yehardware kunye nokuqhusheka imali ngokungeyomfuneko. Ke ngoko, ezi ndlela ziya kunceda ekusombululeni ingxaki yakho ngeyona ndlela ineendleko.
yeka ukuzihlaziya ngokuzenzekelayo windows 10 ekhaya
Uhlaziyo lweWindows kwi-intanethi alusebenzi
chrome windows 10 ayisebenzi
Phinda ufake kwakhona umqhubi windows 10
usetyenziso lwe-netflix ye-pc ayisebenzi